Mkpughe 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mkpughe E Kpugheere Jọn 21:1-27
21 Ahụkwara m eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ,+ n’ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ alaala n’iyi,+ oké osimiri+ adịghịkwa. 2 Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem Ọhụrụ, ka o si n’eluigwe, ebe Chineke nọ, na-agbadata.+ E jikeere ya otú e si ejike nwaanyị a na-alụ ọhụrụ nke a chọrọ mma ka ọ gaa zute di ya.+ 3 M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ sị: “Ụlọikwuu nke Chineke dị ebe ụmụ mmadụ nọ. Ha na Chineke ga-ebikwa. Ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke ga-anọnyekwara ha.+ 4 Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị ha n’anya.+ Ọnwụ agaghịzi adị.+ Iru uju ma ọ bụ ibe ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịzi adị.+ Ihe mbụ niile agafeela.” 5 Chineke, onye nọ ọdụ n’ocheeze ahụ,+ sịkwara: “Ana m eme ihe niile ka ha dị ọhụrụ.”+ Ọ sịkwara: “Dee ha edee, n’ihi na e kwesịrị ịtụkwasị okwu ndị a obi, ha bụkwa eziokwu.” 6 Ọ sịkwara m: “Ha emezuola. Abụ m Alfa na Omega,* mmalite na ọgwụgwụ.+ M ga-enye onye ọ bụla akpịrị na-akpọ nkụ mmiri si n’isi iyi mmiri nke ndụ n’efu.+ 7 Onye ọ bụla meriri n’agha ga-enweta ihe ndị a. M ga-abụkwa Chineke ya. Ọ ga-abụkwa nwa m. 8 Ma ndị ụjọ na ndị na-enweghị okwukwe+ na ndị na-adịghị ọcha na ndị rụrụ arụ na ndị na-egbu mmadụ*+ na ndị na-akwa iko*+ na ndị na-eme mgbaasị na ndị na-ekpere arụsị na ndị ụgha niile,+ a ga-atụba ha n’ọdọ ọkụ ahụ sọlfọ na-eme ka ọ na-enwusi ike.+ Ọ pụtara ọnwụ nke abụọ.”+ 9 Otu n’ime ndị mmụọ ozi asaa ahụ, ndị ji efere asaa ahụ ahụhụ asaa ndị ikpeazụ juru,+ wee bịa gwa m, sị: “Bịa, m ga-egosikwa gị nwaanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ, bụ́ nwunye Nwa Atụrụ ahụ.”+ 10 N’ihi ya, o buuru m n’ike mmụọ nsọ gaa ná nnukwu ugwu dị oké elu. O gosikwara m ka obodo nsọ ahụ bụ́ Jeruselem si n’eluigwe, ebe Chineke nọ, na-agbadata.+ 11 Obodo nsọ a jupụtakwara n’ebube Chineke.+ Ọ na-egbuke egbuke ka nkume dị ezigbo oké ọnụ,* dị ka nkume jaspa nke na-egbuke nke ọma.+ 12 O nwere nnukwu mgbidi dị oké elu, nweekwa ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ. Ndị mmụọ ozi iri na abụọ nọkwa n’ọnụ ụzọ ámá ndị ahụ. E dekwara aha ebo iri na abụọ nke ụmụ Izrel na ha. 13 Ọnụ ụzọ ámá atọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, ọnụ ụzọ ámá atọ adịrị n’ebe ugwu, ọnụ ụzọ ámá atọ adịrị n’ebe ndịda, ọnụ ụzọ ámá atọ adịrịkwa n’ebe ọdịda anyanwụ.+ 14 Mgbidi obodo ahụ nwere nkume iri na abụọ e ji tọọ ntọala ya. E dekwara aha iri na abụọ nke ndịozi iri na abụọ+ nke Nwa Atụrụ ahụ n’elu nkume ndị ahụ. 15 Onye ahụ nke na-agwa m okwu ji okporo ahịhịa amị ọlaedo ọ ga-eji atụ̀ obodo ahụ na ọnụ ụzọ ámá ya na mgbidi ya.+ 16 Obodo ahụ nwekwara akụkụ anọ há nhata. Ogologo ya hakwa ka obosara ya. O wee jiri okporo ahịhịa amị ahụ tụọ obodo ahụ, ya abụrụ na ọ dị ihe dị ka puku kilomita abụọ na narị abụọ na iri abụọ (2,220).* Ogologo ya na obosara ya na ogo ya hà nhata. 17 Ọ tụkwara mgbidi ya, ya abụrụ na ọ dị otu narị kubit na iri anọ na anọ (144).* Ihe mmụọ ozi a ji tụọ ya bụ ihe ndị mmadụ ji atụ̀ ihe. 18 Nkume jaspa ka e ji rụọ mgbidi ya.+ Obodo ahụ bụkwa ezigbo ọlaedo nke yiri enyo na-egbuke egbuke. 19 E ji ụdị nkume ọ bụla dị oké ọnụ* tọọ ntọala mgbidi obodo ahụ. Nkume nke mbụ e ji tọọ ntọala ya bụ jaspa. Nke abụọ bụ safaya. Nke atọ bụ kalsidọni. Nke anọ bụ emerad. 20 Nke ise bụ sadọniks. Nke isii bụ sadiọs. Nke asaa bụ krisolaịt. Nke asatọ bụ beril. Nke itoolu bụ topaz. Nke iri bụ krisopres. Nke iri na otu bụ hayasịnt. Nke iri na abụọ bụ ametist. 21 Ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ ahụ bụkwa nkume pel iri na abụọ. E ji otu nkume pel rụọ nke ọ bụla n’ime ọnụ ụzọ ámá ndị ahụ. Okporo ámá obodo ahụ bụkwa ezigbo ọlaedo, dị ka enyo na-egbuke egbuke. 22 Ahụghị m ụlọ nsọ n’obodo ahụ, n’ihi na Jehova* Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,+ na Nwa Atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ ya. 23 Ìhè anyanwụ na ọnwa abaghị uru n’obodo ahụ, n’ihi na ebube Chineke na-enye ya ìhè.+ Ọkụ* ya bụkwa Nwa Atụrụ ahụ.+ 24 Mba niile ga-eji ìhè ya na-eje ije,+ ndị eze ụwa ga-emekwa ka obodo ahụ dịkwuo ebube. 25 A gaghịkwa emechi ọnụ ụzọ ámá ya emechi n’ehihie, n’ihi na abalị agaghị adị ebe ahụ.+ 26 Ndị mmadụ ga-eto obodo a, sọpụrụkwa ya.+ 27 Ma ihe ọ bụla na-adịghị nsọ na onye ọ bụla nke na-eme ihe rụrụ arụ, nke na-aghọkwa aghụghọ, agaghị aba n’ime ya.+ Ọ bụ naanị ndị e dere aha ha n’akwụkwọ mpịakọta nke ndụ nke Nwa Atụrụ ahụ ga-aba n’ime ya.+
^ Ma ọ bụ “ka nkume pụrụ iche.”
^ Na Grik, “stediọm 12,000.” Otu stediọm bụ mita 185 (amaụkwụ 606.95). Stediọm a abụghị ámá egwuregwu. Gụọ B14.
^ Ihe dị ka mita 64 (amaụkwụ 210). Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “nkume ọ bụla pụrụ iche.”